တရုတ်အိမ်ထောင်စုပိုးသတ်ဆေးဇီဝပိုးသတ်ဆေး Meperfluthrin ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Senton
CAS အမှတ်: 352271-52-4
CAS အမှတ် 352271-52-4
မဂ္ဂါဝပ် 415.20g / mol
ထုပ်ပိုး 25KG / ဗုံ, သို့မဟုတ် Custimised လိုအပ်ချက်အဖြစ်
ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တစ်နှစ်လျှင်တန်ချိန် ၅၀၀
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သမုဒ္ဒရာ၊ လေ， မြေ
လက်မှတ် ICAMA, GMP
HS ကုဒ် 2933199012
Meperfluthrin တက်ကြွဖြစ်ပါတယ် ပိုးသတ်ဆေးdomestica နှင့် pipiens pallens ဆန့်ကျင်။ ဟုတ်တယ်a မြင့်မားထိရောက်သော ရှူရှိုက်မိပါ နှင့်ခြင်ကိုက်သည့်ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစားများသည်ခေါက်ရိုးကျိုး။ အနည်ကျသော်လည်းအနည်းငယ်အဆိပ်ရှိသည်. ဒါဟာမကြာခဏတစ် ဦး အဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည် ခြင်တက်ကြွပစ္စည်း, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်အနည်းငယ်ပျက်စီးမှုရှိပါတယ် လူ့ခန္ဓာကိုယ်.
CAS NO ။ 352271-52-4
Mol ဖိုင်မှတ်တမ်း 915288-13-0.mol
အသွင်အပြင်: အဝါရောင်အလင်းမှောင်မိုက်အညိုရောင်အရည် extraneous ကိစ္စကနေအခမဲ့။ဤထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အခြားထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်, ကဲ့သို့ ခြင် ပိုးသတ်ဆေး, လူကြီး,Synergist နောက် ... ပြီးတော့။
Hebei Senton သည် Shijiazhuang ရှိကျွမ်းကျင်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ကုန်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အခြားထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။, ကဲ့သို့ အဖြူရောင် Azamethiphos အမှုန့်, သစ်သီးပင်များအရည်အသွေးကောင်းသည့်ပိုးသတ်ဆေး, လျင်မြန်စွာထိရောက်မှုပိုးသတ်ဆေး Cypermethrin နှင့် သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင် on.If ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အကောင်းဆုံးသောထိရောက်သောပိုးသတ်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ခြင်ဆေးတိုက်ခြင်းအတွက်အရည်အသွေးကောင်း Meperfluthrin အားလုံးသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံမှအရည်အသွေးမြင့်အန္တရာယ်ကင်းသောပိုးသတ်ဆေးစက်ရုံဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
သိသာ Dimefluthrin ရဲ့ပိုးသတ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှု
စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များ Insecticide Ethofenprox
စီးပွားရေးအရပိုးသတ်ဆေး Piperonyl Butoxide
ထူးခြားသော Microsporidium Fungi Nosema Locustae